Mayelana NATHI - JIANGSU RICHENG MEDICAL CO., LTD
Ukuvuselelwa komkhiqizo, okuthembekile, okusebenziseka kalula, okuphephile kakhudlwana, okungabizi kakhulu
Isitifiketi se-ISO13485 + CE, i-RoHS futhi sifinyelele isitifiketi
15 ubunikazi bemodeli yokusungula yokusungula
Kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende
IJiangsu Richeng Medical Co, Ltd inkampani engaphansi kokutshalwa kwezimali nguJiangsu Richeng Rubber Co, Ltd. ngumenzi wezokwelapha ochwepheshe. Ngokucwaninga ngomkhiqizo okwenziwe ngochwepheshe, ukuthuthukisa kanye nokukhiqiza, sinikeza ngemikhiqizo yedivaysi yezokwelapha ethembekile, ephephile futhi ephumelelayo. Le nkampani inemishini ephelele yokukhiqiza neyokuhlola, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokukhiqiza, nabaphathi abasezingeni eliphakeme, ubuchwepheshe nabasebenzi bokukhiqiza.
Le nkampani isungule uhlelo oluphelele lwe-ISO9001 lwamazwe aphesheya, futhi idlulise isitifiketi sekhwalithi yekhwalithi ye-ISO13485 kanye ne-CE isitifiketi, ihlose ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni kanye nezinsizakalo ezisezingeni lokuqala. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yolwazi ngezinto zokwakha, ucwaningo nentuthuko, ukwakhiwa kobunjiniyela, ukuthuthukiswa komkhiqizo kanye nokuphathwa kwamaphrojekthi, inkampani yethu isesimweni esiphambili embonini, futhi imikhiqizo yethu yathunyelwa emazweni angaphezu kwezi-20 nezifunda, yaphenduka amazwe umlingani othandwayo wabaholi abaningi bezimboni.
Sinethimba le-R&D yangaphakathi nangaphandle, iqembu lethu langaphakathi le-R&D lihlanganiswe ikakhulukazi kunjiniyela benkambiso abaneminyaka engaphezu kwe-10 yesipiliyoni; Ithimba lethu langaphandle le-R&D yiqembu labachwepheshe bezokwelapha abanokuhlangenwe nakho okucebile kliniki. Babheke kakhulu ekusebenzeni kahle kwemikhiqizo ekhona nokwakhiwa kwemikhiqizo emisha.
URicheng uphatha amalungelo obunikazi bokuqanjwa kwemodeli engu-15.